हाम्रा पाइलटलाई मिसगाइड गरेकाले दुर्घटना भयो’ - Tanahu Post
हाम्रा पाइलटलाई मिसगाइड गरेकाले दुर्घटना भयो’
काठमाडौं- नेपाल नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरणले अवतराण असाधारण भएकाले विमान दुर्घटना भएको बताइरहदा युएस बंगला विमान कम्पनिले भने पाइलटलाई अलमल्याइएका कारण दुर्घटना हुन पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ । विमान दुर्घटना त्रिभुवन विमानस्थलको एयर ट्राफिक कन्ट्रोल (एटिसी)को लापरवाहीका कारण भएको युएस बंगला एयरलाइन्सले आरोप लगाएको हो । एटिसीबाट गलत सन्देश आएकाले यो विमान दुर्घटना भएको युएस बंगला एयरलाइन्सले प्रारम्भिक अनुसन्धानमा निकालेको छ ।
Prevकेहि महिना पहिले श्रीमती गुमाउनु भएका मिलानसार बराल दाइलाई आज फेरि डाक्टर छोरी गुमाउनु भयो !
Nextबिमान दुर्घटनामा बच्न सफल नेपाल घुम्न आएकी अल्मुन्नाहर अन्नीले विमानभित्र जे देखिन्…
कान दुखेर हैरान हुनुहुन्छ ? ५ मिनेटमै निको पार्ने यस्तो छ घरेलु उपाय , जानी राखौ (15)